Forum serasera malagasy Mijaly marina ve ny ankizy mpianatra any dago amin'ny sekoly sasantsasany? - Dinika forum.serasera.org
Mijaly marina ve ny ankizy mpianatra any dago amin'ny sekoly sasantsasany?
Fitohizan'ny hafatra : Mijaly marina ve ny ankizy mpianatra any dago amin'ny sekoly sasantsasany?
voromailala - 12/09/2013 10:42
Sendra naheno resaka izaho fa tsy fantatro izay fahamarinany fa mba manontany anareo eto.
Misy hono sekoly any madagasikara manery ny ankizy ahazo noty tsara, dia bedesina raha vao tsy tsara ny naoty, dia lasa misy fihatraikany amin'ilay zaza ilay izy farany.
Misy mihintsy azany zaza mbola latsaky ny 15 taona hono entin'ny RAR any ampin'ny Psy mihintsy.
Efa nisy naheno ve ianareo sa efa nisy nihaina izany mihintsy?
Nehemiah - 12/09/2013 10:54
Marina fa somary tsy mampino izany, fa izaho aloha dia mahita fa misy tokoa ny sekoly élitistes, katôlika ny ankabeazany
voromailala - 12/09/2013 11:01
Nehemiah> Tena miombokevitra tanteraka aminao aho amin'izay satria izaho nianatra tao amn'ireny sekoly ireny.
Tsy hafenina fa tena mahay tokoa ny ankamaroan' ny ankizy nianatra tamin'ireny sekoly ireny (za ohatra , mivoaka kely le ego eto), ary tena mifanaraka tsara amin'ny ilain'ny "société".
Kanefa misy zavatra tsapako fa tsy ampy, lasa vao maika lasa "machine" na "automate" ilay olona avy eo, lasa tsy fifaliana intsony ilay hoe mianatra.
hery - 12/09/2013 21:22
Ny mahaliana fotsiny dia toa mampisaotra ilay izy aty aoriana. Samy miteny daholo hoe mafy ny nanjo antsika taloha dia betsaka anefa isika no miteny hoe toa nahatsara ihany ireny.
Ny mahatonga ny ankizy mijaly angamba dia tsy mitovy intsony ilay toetrandro sy toetsaina. Taloha nanana fahefana (autorité) mihitsy izany mpampianatra, olon-dehibe, sy ray aman-dreny izany. Tsy nila nibedy be akory dia efa natahorana. Fa amin'izao dia efa tsy izany intsony. Tsy mipetraka intsony ilay soatoavina.
Ka angamba samy diso daholo. Na ny mpanabe izay manery ny ankizy hiaina tahaka izay niainany sy hitany fa nahatsara azy. Na ny ankizy izay tsy mba maka modely an'ireo izay mpanabe izay hitany fa tafavoaka tsara.
voromailala - 13/09/2013 10:03
hery> misy fahamarinana izany voalazanao izany, tokony samy beazina na ny mpanabe na ny ankizy.
Fa kosa eo amin'ny resaka fahefana, amiko tsy tokony hatahotra ny ray amandreny, mpanabe ny ankizy fa tokony hanaja fotsiny. Satria raha matahotra ny mpampianatra ny ankizy lasa tsisy tsirony intsony ilay fianarana, lasa fanerena ilay izy fa tsy fitiavana ny hoe hianatra intsony.
Io moa no nahatonga any nanome soskevitra an'ireo fampianarana hafa toy ny Montessori, Freinet, Steiner, Krhishnamurti, sns.... izay azontsika jerena eto: Fianarana velona
Baovolah - 20/09/2013 23:15
Ny fitaizana dia manomboka ao an-trano ary ny Ray amandreny no tompon' andraikitra voalohany indrindra. Raha misy kosa ny fanerena ny ankizy aminy sekoly sasantsasany dia adidy ny Ray aman-dreny sy ny mpanabe no manazava ny antony "maha tsara ny Noty". Ny maha ankizy azy dia mety tsy mbola ho tsapany ny lafitsara izany , fa tsy bedesina be fahatany
nefa ny fianarana sy fanabeazana tsy vita iray andro.
Lasa mikorontan- tsaina ilay amkizy ,Ary ny hiafarany dia manantona Psy> Voalazany voromailala.
Tokony manaraka traikefa vaovao momba ny fampianarana ny sekoly
mba manintona an ireo ankizy ho tia fianarana fa tsy ny tota ihany no avadibadika.
booboo - 21/09/2013 10:31
Vao omaly alina aho nijery reportage t@ Arte mikasika ny Stress Scolaire, " caratéristique du système français, l'obsession de la réussite scolaire serait à l'origine de nombreux echecs scolaires. Ce document dresse un état des lieux sans concessions de l'enseignement à la française ". Hitako misy itovizana @ ny antsika any M/car ihany.
Nehemiah - 21/09/2013 10:42
Diso compétitif loatra marina ny fampianarana frantsay
vahiny2004 - 22/09/2013 20:47
Ity resaka psy ity no mbola tsy reko teto Madagasikara nefa
Baovolah - 22/09/2013 21:06
aie ve ! tara indray zah raha izany ko
5laody - 27/09/2013 17:59
Tsy tara ianao fa misy equivalent-ny ny psy eto amintsika.
Misy mihintsy azany zaza mbola latsaky ny 15 taona hono entin'ny RAR any ampin'ny Psy dadarabe mihintsy.
Baovolah - 27/09/2013 19:31
Marina ratsy lasa toy ny laklosy Mopera izy ty. Ny eo tsy vita dia hampiana.
booboo - 18/12/2013 12:38
Tsy mbola novakiako fa sendra hitako teny ho eny, Hanta Rakotomavo, Libérer l'école malgache : Propositions pour une pédagogie informelle. tsy tadidiko na édit. na inona na inona.